Sidee ayaa loo ciyaari doonaa wareegga rubac-dhammaadka ee Copa America 2021?… (Isku aadka wareeggan, sida xulalka soo baxay isku arkayaan & xogaha aad uga baahan tahay heerka bug-baxa tartankan) – Gool FM
Sidee ayaa loo ciyaari doonaa wareegga rubac-dhammaadka ee Copa America 2021?… (Isku aadka wareeggan, sida xulalka soo baxay isku arkayaan & xogaha aad uga baahan tahay heerka bug-baxa tartankan)
(Brazil) 30 Juun 2021. Wareegga guruubyada tartanka qarammada qaaradda Koonfur Ameerika ayaa dhowaan lasoo gabagabeeyay iyadoo laba xul oo qura ay tartankan ka hareen maadaama ay min afar xul kasoo gudbeen labadii guruub ee uu tartanka ka koobnaa.
Min afar xul ayaa labada guruub kasoo gudbay taasoo tirada guud ka dhigtay siddeed xul oo ciyaaraya wareegga quarter-final-ka tartanka ama rubac-dhammaadka tartanka iyagoo si is dhaaf ah isugu beegmaya xulalka kasoo gudbay labada guruub.
Kaliya Bolivia iyo Venezuela ayaa isaga harat tartankan wareeggiisa guruubyada.
Guruubka A waxaa kaalinta koowaad kaga soo baxay xulka Argentina, waxaana soo labeeyay Uruguary iyadoo booska saddexaad uu ku dhammeystay xulka Paraguay, waxaana Chile, halka Guruubka B uu xulka Brazil kaalinta koowaad ka galay, iyadoo Peru uu ku dhammaystay booska labaad, waxaana booska saddexaad ku dhammaystay Colombia, halka uu afaraad galay Ecuador.
Taas waxay ka dhigan tahay in wareegga siddeed dhammaadka loo ciyaari doono oo xulalku qaabkaan isugu beegmeen: Peru vs Paraguay, Brazil vs Chile, Uruguay vs Colombia iyo Argentina vs Ecuador.
Waqtiga la ciyaari doono kulammada siddeed dhammaadka Copa America iyo Magaalooyinka lagu ciyaarayo:-
July 2 saacadda 00:00 Xilliga geeska Afrika: Peru vs Paraguay, Goiania.
July 3 saacadda 03:00 Xilliga geeska Afrika: Brazil vs Chile, Rio de Janeiro.
July 4 saacadda 01:00 Xilliga geeska Afrika: Uruguay vs Colombia, Brasilia.
July 3 saacadda 04:00 Xilliga geeska Afrika: Argentina vs Ecuador, Goiania.
Wareegga semi-finalka ama afar dhammaadka waxa uu noqon doonaa in guuleystaha Peru vs Paraguay uu wajihi doono xulkii soo adkaada Brazil vs Chile, halka Guuleystaha Uruguay vs Colombia uu wajihi doono xulkii soo badiya Argentina vs Ecuador.
Waxaa la qorsheeyey in kulanka Final-ka tartankan Copa America uu ka qabsoomo 10-ka bisha July garoonka the Estadio do Maracana Magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil.